Margarekha अब शेरबहादुरजीकाे कुनै चान्स छैन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले दाबी – Margarekha
अब शेरबहादुरजीकाे कुनै चान्स छैन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले दाबी
आगामी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा समूह पराजित हुने पक्कापक्की भएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले दाबी गरेका छन् । डा. कोइरालाले भने- ‘अहिले रामचन्द्रजी, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौलाजी, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत र हामी बसेर छलफल गरिराखेका छौं । शिक्षक संघदेखि लिएर सबैमा देखियो, अब विस्तारै हेर्दै जानोस् । काठमाडौंमा ट्रेड युनियनको चुनाव भो । उहाँहरुले जित्नुभएन ।’
चुनाव जितेपछि एउटा विवाह पार्टीमा यसो हेल्लो भो । अरु कुराकानी त्यति भएको छैन । दुई तीनपल्ट फोन गरें, उठेन । मन्त्री भइसकेपछि बीजी हुनुभो होला ।अनलाइनखबरबाट
२ बैशाख २०७५, आईतवार १९:५२ प्रकाशित